२०२२ मा हेर्नको लागि उत्कृष्ट एनिमे - क्र्याडल दृश्य
२०२२ मा हेर्नको लागि उत्कृष्ट एनिमे
by लिली गार्सिया 26th डिसेम्बर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड २०२२ मा हेर्नका लागि उत्कृष्ट एनिमेमा
यो लगभग नयाँ वर्ष पहिले नै छ र त्यहाँ धेरै अद्भुत र नयाँ एनिमहरू बाहिर आएका छन्। यी मध्ये केही अचम्मका छन् र केही तल दिइएका छन्। जे होस्, यस सूचीमा, हामी तपाईंले २०२२ मा हेर्न सक्ने उत्कृष्ट एनिमेहरू बारे जाँदैछौं। हामी २०२२ मा हेर्नका लागि उत्कृष्ट एनिमे शृङ्खलाहरू र एनिम चलचित्रहरू पनि समावेश गर्नेछौं। हामी नयाँ र आगामी एनिमे र विगतको एनिममा जाँदैछौं तपाईंले अझै हेर्ने विचार गर्नुपर्छ।
१०. एक टुक्रा (२३ सिजन) - २०२२ मा हेर्नका लागि उत्कृष्ट एनिमे
एक टुक्रा एनिमे
अहिले सबैभन्दा लामो चलिरहेको एनिमे मध्ये एकसँग सुरु गरौं, र त्यो पक्कै पनि हो एक टुक्रा। यो एनिम 1999 देखि चलिरहेको छ र यो नाम वरिपरि धेरै एनिम फ्यानहरु द्वारा मनपराएको छ। यो सूची समावेश नगरी पूरा हुँदैन एक टुक्रा। यो पक्कै पनि २०२२ मा हेर्नको लागि राम्रो एनिम हो। यो लगानी गर्नको लागि उत्कृष्ट एनिमी हो र पक्कै पनि Binge वाचको लागि राम्रो एनिमे हो। एक टुक्रा समुद्री डाकूहरूको समूहलाई पछ्याउँछ जब तिनीहरू खुला समुद्र पार गर्छन् र यसले तिनीहरूको साहसिक कार्यलाई पछ्याउँछ।
९. टाइटनमा आक्रमण (४ सिजन)
टाइटन मा आक्रमण
टाइटन मा आक्रमण एउटा साहसिक शैलीको एनिमे हो जुन डाइस्टोपियन संसारमा सेट गरिएको छ जहाँ संसारमा टाइटन्स भनेर चिनिने मानवीय प्राणीहरू होइनन्। टाइटनहरूले मानिसहरूलाई खान्छ जब उनीहरूलाई भेट्टाउँछन् र कथा यस्तो बिन्दुमा हुन्छ जहाँ मानवतालाई टाइटन्सलाई बाहिर राख्न3पर्खालहरू बनाउन बाध्य पारिएको थियो। टाइटनको बारेमा जान्नको लागि तिनीहरूको बारेमा हाम्रो लेख पढ्नुहोस् (यहाँ)। त्यहाँ4हालका सिजनहरू उपलब्ध छन् र अर्को वर्ष अन्तिम सिजनमा नयाँ निरन्तरता आउँदैछ। देखि टाइटन मा आक्रमण अझै सकिएको छैन यो अझै पूरा भैरहेको बेलामा प्रवेश गर्नको लागि अझै राम्रो एनिम हो।
8. Jojo's Bizzare Adventure (5 सिजनहरू)
जोजोको बिज्जरे साहसिक
के व्याख्या गर्दै जोजोको बिज्जरे साहसिक धेरैका लागि गाह्रो काम हुन सक्छ तर एक अर्थमा: जोस्टार परिवारको कथा, जो तीव्र मानसिक शक्तिले भरिएका छन्, र प्रत्येक सदस्यले आफ्नो जीवनभर सामना गर्ने साहसिक कार्यहरू। श्रापित जोस्टार ब्लडलाइनको दुष्ट शक्तिहरू विरुद्धको संघर्षको इतिहास। यो पक्कै पनि 2022 मा हेर्नको लागि सबै भन्दा राम्रो एनिमे मध्ये एक हो र यो एक द्वि घातुमान योग्य एनिमे पनि हो।
7. takt op.Destiny (1 सिजन)
takt op. Destiny - भाग्य
हाम्रो सूचीमा सबैभन्दा नयाँ एनिमेस मध्ये एक भएको कारण, भाग्य अप। भाग्य हेर्न मिल्ने सामग्रीको सन्दर्भमा प्रस्ताव गर्न त्यति धेरै नहुन सक्छ। जे होस्, यो 2022 मा हेर्नको लागि सबै भन्दा राम्रो एनिमे मध्ये एक हो किनभने यसले ल्याउँछ। शृङ्खलाले व्यापक ध्यान पाइरहेको छ र म पक्का छु कि हामी सबैले एक क्लिप देखेका छौं भाग्य (मुख्य महिला चरित्र) केहि समय वा अन्य।
कथा पनि निकै रोचक छ- सन् २०४७ मा अमेरिकामा, जुन D2047, Takt, एक कन्डक्टर, डेस्टिनी नामक म्युजिक आर्टसँग साझेदारी गरिएको छ। संसारमा संगीत फिर्ता गर्न Takt yeans, र भाग्यले D2 नष्ट गर्न चाहन्छ। तिनीहरूको उद्देश्य न्यूयोर्क जाने हो. यसमा हाल ११ एपिसोडहरू छन्, प्रत्येक मङ्गलबार बेलुकी ५:०० GMT मा एउटा नयाँ रिलिज हुन्छ।
६. स्लाइम डायरीहरू (१ सिजन)
स्लाइम डायरीहरू - रिमुरु
यदि तपाईंले लोकप्रिय एनिमे हेर्नुभयो भने, "त्यो समय मैले स्लिमको रूपमा पुनर्जन्म पाएँ"त्यसो भए यो एनिमे सायद तपाईको लागि मात्र हो। डिसेम्बर २०२१ सम्म, र यो २०२२ मा हेर्नको लागि उत्कृष्ट एनिम हो। त्यहाँ अझै एपिसोडहरू अपलोड भइरहेका छन् र एनिमे र मंगा सुस्त हुने कुनै संकेत देखाउदैन। को सारांश स्लाइम डायरीहरू निम्नानुसार छ: "मुख्य एनिमे, कथाको पहिलो सिजनको माध्यमबाट मध्य-मार्ग सेट गर्नुहोस् रिमुरु र उसको राक्षस राज्यको प्रारम्भिक, शान्तिमय दिनहरू पछ्याउँछन्। यो पहिलो एपिसोड (र सम्भवतः एपिसोडहरू आउँदैछन्) एक एकजुट कथा बनाउँदैन।"
शीर्ष १० काल्पनिक एनिमे नेटफ्लिक्समा हेर्नका लागि
५. ५ सेकेन्डमा ब्याटल गेम (१ सिजन)
५ सेकेन्डमा ब्याटल गेम - २०२२ मा हेर्नको लागि उत्तम एनिमे
भन्दा अलि कम सीधा र कार्य-प्याक केहि खोज्दै हाइराइज - आक्रमण? त्यसपछि तपाईंले भर्खरै फेला पार्नुभयो।5सेकेन्डमा युद्ध खेल पक्कै पनि २०२२ मा हेर्नको लागि र राम्रो कारणका लागि उत्तम एनिम मध्ये एक हो। तपाइँ Crunchyroll मा Anime को सबै 2022 एपिसोडहरू स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। को सारांश एनिमे निम्नानुसार जान्छ: “खेल र कोनपिटो (जापानी मिठाई) मन पराउने हाईस्कुलर अकिरा शिरोयानागीलाई आफूलाई मियोन भन्ने रहस्यमय केटीले अचानक युद्धको मैदानमा तानेको छ। सहभागीहरूलाई भनिएको छ "परिवार दर्ताबाट मेटाइयो, एक प्रयोगमा संलग्न भयो, र निश्चित शक्तिहरू प्राप्त गर्यो".
४. इक्की टुसेन (४ सिजन)
यदि तपाईंले पहिल्यै सुन्नुभएको छैन भने Ikki Tousen त्यसपछि तपाईं सवारीको लागि हुनुहुन्छ। यो एक उत्तम लडाकु एनिमेस हो जुन अहिले बाहिर छ र धेरै लामो इतिहास छ। पहिलो एपिसोड जुलाई 30 को 2003th मा प्रसारित भयो, र शो तब देखि चलिरहेको छ। सकिएका छन्4ऋतु र केही OVAs र यसको साथ जानको लागि विशेष। यो निश्चित रूपमा 2022 मा हेर्नको लागि सबै भन्दा राम्रो एनिमे मध्ये एक हो, र यस कारणको लागि, तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुपर्छ। सारांश निम्नानुसार छ: "श्रृङ्खला जापानको कान्टो क्षेत्रको सबै आउट टर्फ युद्धको वरिपरि घुम्छ जहाँका लडाकुहरू सात विद्यालय सर्वोच्चताका लागि लडिरहेका छन्, र कथा नान्यो एकेडेमीमा स्थानान्तरण गर्ने पश्चिमका लडाकु हाकुफु सोनसाकुमा केन्द्रित छ।
३. विश्व ट्रिगर (३ सिजन) - २०२२ मा हेर्नको लागि उत्कृष्ट एनिमे
विश्व ट्रिगर लगानी गर्नको लागि उत्कृष्ट एनिम हो किनभने यसमा पहिले नै २ सिजनहरू छन् र अहिले साप्ताहिक रूपमा जारी भइरहेको छ। तेस्रो सिजनले हाल प्रत्येक हप्ता एउटा एपिसोड जारी गर्दैछ। यस कारणले गर्दा, यो २०२२ मा हेर्नको लागि उत्कृष्ट एनिमे मध्ये एक हो। सारांश निम्नानुसार जान्छ: "कथा पछ्याउँछ एक युमा कुगा जो तेस्रो मिकाडो शहर मध्य विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्दछ जहाँ उसले अर्को केटालाई भेट्छ जो सीमा एजेन्ट हो।। यद्यपि, यो बाहिर जान्छ कि युमा वास्तवमा एक मानवीय छिमेकी हो, र उसको आगमनले छिमेकीहरू विरुद्धको युद्धमा जस्तो देखिन्छ जस्तो हुँदैन भन्ने संकेत गर्दछ।
2. कोमी संचार गर्न सक्दैन (1 सिजन)
कोमी संचार गर्न सक्दैन - कोमी
हामीले कभर गरेका छौं कोमी संचार गर्न सक्दैनन् एकदम व्यापक रूपमा, र यो किनभने यो क्षणमा एक धेरै लोकप्रिय एनिमे हो र निश्चित रूपमा 2022 मा सबै भन्दा राम्रो एनिमे मध्ये एक हो। कोमी संचार गर्न सक्दैनन् नामको बारेमा एक एनिमे हो कोमी जो चरम सामाजिक चिन्ता छ। यही समस्याका कारण उनी भेट्दा मानिसहरूसँग कुरा गर्न पनि असमर्थ छिन् । बरु, उनले नोटप्याडमा भन्न चाहेका सबै शब्दहरू लेख्छन् र व्यक्तिलाई देखाउँछन्। कोमीको लक्ष्य 100 साथी बनाउन र मानिसहरूसँग कुरा गर्न सिक्न छ। हामी तपाईंलाई प्रवेश गर्न धेरै सिफारिस गर्छौं कोमी संचार गर्न सक्दैनन् यो अझै अधूरो छ र लगानी गर्न को लागी एक उत्कृष्ट चारैतिर एनिम छ।
1. Bakemonogatari (1 सिजन, Monogatari श्रृंखला को भाग)
बाकेमोनोगतारी - अररागी र सेन्जौघरा
निस्सन्देह, २०२२ मा हेर्नको लागि एक उत्तम एनिम अझै पनि छ बेकेमोनोगेटरी। यो सबैभन्दा उच्च मूल्याङ्कन गरिएको एनिमे मध्ये एक हो क्रंचयरोल र पनि सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक। द मोनोगतारी श्रृंखला जसले भूत कथाहरूमा ढिलो रूपमा अनुवाद गर्दछ अररागी, एक विशेष शक्ति संग एक उच्च विद्यालय विद्यार्थी। उसलाई पिशाचले टोकेको छ, र जस्तै, उसले आकार परिवर्तन गर्ने शक्ति प्राप्त गर्दछ। को सारांश बेकेमोनोगेटरी निम्नानुसार छ:
"प्लट। Bakemonogatari एनिमे श्रृंखलाले हल्का उपन्यासहरूको कथानकलाई पछ्याउँछ, जुन कोयोमी अररागी नामक हाईस्कूल केटाको जीवनको विवरण, जसलाई पिशाचले टोकेपछि मेमे ओशिनो नामक मानिसको सहयोगमा मानव बन्न सफल भयो, यद्यपि उसको शरीरमा केही पिशाच लक्षणहरू बाँकी थिए।
हामी तपाईंलाई Bakemonogatari हेर्ने सुझाव दिन्छौं, यद्यपि, यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, कृपया हाम्रो समीक्षा पढ्न विचार गर्नुहोस्। बेकेमोनोगेटरी एनिमे यहाँ: https://cradleview.net/is-bakemonogatari-worth-watching/ यो कारण हो बेकेमोनोगेटरी त्यहाँ सबैभन्दा लोकप्रिय एनिमेसहरू मध्ये एक हो र यसमा प्रवेश गर्ने अन्य धेरै कारणहरू छन्।
टैग: ,2022०,००० आत्मा हेर्नको लागि 2022 एनिमे अहिले हेर्नको लागि एनिमे हेर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो 2022 anime सबै भन्दा राम्रो anime हेर्नको लागि उत्तम एनिमे २०२२ मा हेर्नको लागि उत्तम एनिमे अहिले हेर्नको लागि उत्तम एनिमे सबै भन्दा राम्रो नयाँ anime हेर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो नयाँ anime
अघिल्लो प्रविष्टि जापानी सिटी पप - सुन्नको लागि शीर्ष 25 ट्र्याकहरू [इनसर्टहरू सहित]
अर्को प्रविष्टि अभिजात वर्गको कक्षा - सीजन २ प्रीमियर मिति + अन्त्य वर्णन गरीन्छ